Sekumthelele izithelo ezinhle ukulinda ithuba lakhe oweSuperSport - Impempe
Sekumthelele izithelo ezinhle ukulinda ithuba lakhe oweSuperSport
Ngathi kukhona umthwalo osukile emahlombe enjini yeSuperSport United, uJesse Donn esiqala ukuthola imidlalo yize isinonyaka nohhafu ifikile kuleli qembu likaKaitano Tembo.
UDonn (22) olihlikihla maphakathi nenkundla ufike kwiSuperSport esuka kwiCape Ubuntu United kade egqame kwiNedbank Cup.
Nakuba uDonn eke weqiwa ijezi ekhona isikhathi eside kodwa ukholelwa ekutheni bekusemqoka ukuthi asilinde isikhathi sakhe ngokuqhubeka nokusebenza njengomnyuzi.
“Ngicabanga ukuthi ukuzikhandla kwami sekuyavela kubaqeqeshi njengoba sengiqala ngithola imidlalo esikimini esikhulu. Sekuphele unyaka nohhafu ngisebenza ngokukhulu ukuzinikela kodwa ngingalitholi ijezi.
“Bengazi vele ukuthi kufanele ngilinde kwazise iqembu libophele inqwaba yabadlali abadlalela amazwe abo.
“Okumnandi kakhulu enhliziyweni yami nabanye abadlali bayabona ukuthi ngiyasebenza futhi nabo bakujabulele ukuthi sengiyaqala ngithola imidlalo.
“Ngizishaya isifuba ngokuba nesineke ngilinde ngiphinde ngingadikibali njengoba sengidlala nje manje.
“Engihlelile ukuthi ngiqhubeke nokusebenza ukuze ngingeke ngiphinde ngihlale omunye unyaka nohhafu eceleni. Ngathi kukhona uthwalo osukile emahlombe ami,” kusho yena.
Emdlalweni weligi weSuperSport odlule neLamontville Golden Arrows ebaphuce amaphuzu besekhaya, uDonn akakhali kakhulu yize umlando uyohlale njalo uthi bahlulwa.
“Sidlale kahle futhi besingcono kune-Arrows. Amathuba esiwakhile abemaningi ngalendlela yokuthi akukholakali ukuthi siqede lowa mdlalo ngaphandle kokubhakuzisa inethi okungenani kanye.
“I-Arrows ithole lelo thuba elilodwa yalisebenzisa ngendlela kwaphela kanjalo,” kusho yena. Uzimisele uDonn ukuthi baqhubeke nendlela abenze ngayo kwi-Arrows uma sebebhekene neBlack Leopards emdlalweni weligi ngoMgqibelo ngo 3 ntambama.
“Uma senza ngale ndlela nakanjani imiphumela evuna thina izovela. Sibhekene neLeopards enzima ngoba isimo sayo asisihle futhi njengoba siya kuyo, nakanjani sizothwala kanzima. Yize kunjalo kodwa amava okunqoba sinawo angikungabazi lokhu.
“Siyazithemba futhi amagoli adingekayo sizowashaya kulokhu. Ngeke senze esikwenze kwi-Arrows ukuyiyeka igoduke namaphuzu,” kusho uDonn.
Previous Previous post: Ubonge iphuzu iBaroka ibabhincisela nxanye oweMaritzburg
Next Next post: Uyoyishaya kuma-Olympics impempe owodumo lwamakhadi abomvu